Asa Fotoana:Araka Ny Tom Husnik
Mitady asa tombontsoa azo indraindray ho tena manahiran-tsaina mihitsy sy sarotra ny fiaraha-mientana, raha ny tena marina ny loharanom-mikaroka dia tsy fantatry ny olona. Toy izany ny olona dia nanoro hevitra ny hampiasa ny fomba an-tserasera mitady ny tanjona ny fahazoana asa opportunities.
Amin'ny Tambajotra Ara-Barotra – Mivarotra Vaovao
Ny noforonin'ny tranonkalam-Pifandraisana Manerantany, ary ny fampidirana amin'ny fiainantsika, dia namorona midadasika ny global tsena an-toerana. Mazava ho azy, azo atao ny mivarotra ny zava-drehetra avy ny fiara mba DVD ny. Ny hafa zavatra azonao atao ny mivarotra no vaovao, ary izany no mety indrindra ataonao rehetra .. .
Sanatria ianao tsy nahatsapa sahady, ny fanaovana ny vola ao amin'ny aterineto dia hafahafa sy mahafinaritra ny lalao...Na dia eo aza ny plethora ny vaovao hita ao amin'ny manokana fomba fiasany ary ny fomba fiasa izay mety hamela anao mba hahatratra ny solid fidiram-bola an-tserasera, noho izany, maro ny olona mbola tolona, maro no mbola tsy manao izay misy ny vola an-tserasera ao amin'ny rehetra.
Backfile Tahirin-kevitra Mizaha dia mizaha ny farany ary archived taratasy rakitra, tahirin-kevitra, blueprints na hafa-taratasy sy ny converting azy ireo ao amin'ny electronic lamina, manome anao ny fahafahana hampiasa azy ireo amin'ny alalan'ny ny PC, tambajotra, na an-tserasera mampiasa ny World Wide Web. Ny ankamaroan'ny orinasa taorian'ny fanadihadiana sasany mahita fa ny loharanon-karena ilaina mba hanomboka ny manokana backfile mizaha ny asa no tena lafo vidy kokoa ny fomba dia iray, ary izany indrindra heny ny tsy fahampian'ny voaporofo fa marina sy ny amo...
Tantara ringtones Tantaran'ny ringtones
Mahaliana ny lahatsoratra manome mahaliana vaovao momba ny tantaran'ny Ringtones
Fahalalana Ny Varotra Fanofanana Ny Tolotra
Tsy isalasalàna, mpiasa no backbone izay fandraharahana! Raha tsy jerena ny habe sy ny renown ny orinasa, ny fahombiazana, profitability sy ny fahelàna velona ny fandraharahana mivantana mitanila ny professiona
Mpanoratra manana ny creative fahafahana sorito ny teny ny sary. Ry zareo dia manana ny fahafaha-miserasera amin'ny alalan'ny teny voasoratra. Mpanoratra ny asany afaka manoratra lahatsoratra ao foronina nirafitra tamin'ny vivid-manao maro na mba hanoratra lahatsoratra ny fandrakofana tsy foronina toy ny rafi-pampianarana ny loharanon-karena, vaovao, ny fahitàn'ny, ara-teknika ny antontan-taratasy, na ny lahatsoratra momba ny siansa, ny tontolo iainana sy ny fahasalamana.
HATRAMIN'IZAY NAHAZO BUSTED ARAKA NY WORLD WIDE WEB? MySpace-ers sy Forumgoers Swap Hevitra: Io Great Web-ny dokam-barotra fitaovam -
Vohikala vaovao, natao araka ny tanora, solosaina-savvy, U. S. mpandraharaha, fa manova ny solosaina amin'ny Aterineto ny tantara araka ny substituting nitsidika ny tranonkala amin'ny alalan'ny tranokala izay mialoha ny screened ho ny votoaty sy ny removes teo aloha karazany amin'ny Aterineto tantara avy amin'ny ny solosaina ' izany rehetra izany dia tsindrio ny iray. Ireo mialoha ny vohikala screened, antsoina hoe SwapSites, dia tohanan'ny tompon'ny izay te traikefa vaovao ity amin'ny sehatra dokambarotra. Hiakatra sy ny solo arika dia ny iray dia tsindrio ny fomba hiarovana ny fiainana manokana ao amin'ny aterineto.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika lisitry ny folo ny tombontsoa sy ny antony Bluetooth mampiasa ny teknolojia.
Manomboka Amin'ny Web Design Fandraharahana
Ny world wide web fotsiny mitsahatra mitombo. Ny fandraharahana mahafantatra ny tombontsoa ny maha-ao amin'ny tranonkala, fa tsy foana ny hahafantatra ny fomba design tsara vohikala. Raha toa ianao ka manana ny sasany famoronana sy mahalala fototra momba ny web design, ianao dia mety ho liana amin'ny fanombohana web design fandraharahana.
Aterineto Ny Fivarotam-Panafody: Hanampy na Tsy?
Online hikatona hanolotra be dia manasongadina fa entice ny mpanjifa mba baiko avy amin'izy ireo fa tsy handeha ny pharmacy. Marina ampy, ny fisafidiana mividy fanafody an-tserasera, dia tena ilaina, saingy zava-dehibe ny mahazo ny tombontsoa sy manohitra mialoha ny fisafidiana.
Raha toa ianao ka vao manomboka vaovao fandraharahana na tsotra indray, ny iray amin'ny tetibola, betsaka ny fomba mahazo maimaim-barotra noho ny an-trano mifototra amin'ny ny fandraharahana. Tsy ny rehetra no afaka ny ho voavidy mahery setra ara-barotra na ny fanaovana dokam-barotra ny fampielezan-kevitra. Mamela ny hiatrika izany - dokam-barotra dia lafo. Raha ny marina, ho an'ny maro ny fandraharahana, dokam-barotra dia ny lehibe indrindra ny fandaniana fa izy ireo incur. Izany, indrindra indrindra fa marina ny an-trano mifototra amin'ny ny orinasa noho ny, amin'ny ampahany, satria misy tsy maro fanampiny fandaniana ho an'ny fandraharahana operated...
fohy review ny hijanona vaovao haivarotra ny rafitra antsoina hoe "Ny Spiderweb Haivarotra Ny Rafitra",iray mandeha ho azy ara-barotry ny rafitra izay manampy anao "izao anao izao tontolo izao wide web"
Mora Ny Manomboka Ny An-Trano Mifototra Amin'ny Ny Fandraharahana
Mora ny manomboka ny an-trano mifototra amin'ny ny fandraharahana. Rehefa ity ny fandraharahana dia nankasitraka amin'ny fomba fiasa matihanina, ny rewards ireo mahavalalanina.
Manatevin-Daharana Ny Resaka
Marika ara-barotra dia rehetra momba ny enhancing ny mindshare iray ny vokatra na ny tolotra. Ny tanjona dia ny ho ny marika anarana ho eo an-tampon'ny ny mpanjifa ao an-tsaina ao amin'ny fanoloran-filazana generic resaka miandraikitra ny orinasa ny tolotra.
Ny Fisafidiana Ny Niche Tsena – Mivoatra Laser Hifantoka
Tahaka ny taloha vazivazy goes, ny zavatra tsara indrindra momba ny Aterineto dia afaka manao virtoaly na inona na inona, ny zavatra ratsy indrindra momba ny Aterineto dia afaka manao virtoaly na inona na inona.
Finday Varotra tsy Vonona Yeild amin'ny Aterineto
Tsy misy resaka fa hoe ny aterineto dia revolutionized fandraharahana. Maro ny olona no tsy afa-mandoa ny volavolan-dalàna an-tserasera, saingy koa nanome baiko ny vokatra sy ny tolotra amin'ny iray mandrakizay vahana ny tahan'ny koa. Fandraharahana amin'ny aterineto ny fisiany dia nisokatra ny tenany hatramin'ny vaovao an-tsena izay maro mpanjifa hanararaotra manamora ny famahana ny fiantsenana avy amin'ny pejy raha ny hita maso tsy misy hafa avy amin'ny catalog.
Offshore ara-Dalàna dia hita any Panama sy any ampitan-dranomasina. Izy ireo hanolotra offshore banky kaonty, [object Window], Tombony ny fiarovana sy ny Offshore Corporation. Azonao atao ny mamorona Panama kaonty any amin'ny Banky any 3-5 andro.
Ny heriny Nanoratana ny e-Boky
Nanoratra e-boky dia mety ho kokoa ny vidiny mahomby dia midika hoe mba hampitombo ny asanao raha ny maha-environmentally firahalahiana ao amin'ny asa. Raha toa ianao ka dia midika hoe manao anarana ho an'ny tenanao ho mpanoratra, dia angamba ny manoratra e-boky dia zavatra mety hanandrana.
Ny fandraharahana Hanomboka-up Fandaniana
Raha toa ianao ka raha raisina manomboka amin'ny firenenao ny fandraharahana, avy eo ianao dia tsy misy isalasalana fa heverina ho toy ny fampiasam-bola ilaina ho an'ny fandraharahana isan-karazany manomboka ny-up fandaniana.
Ny Occupational Ny Fiarovana Ara-Pahasalamana Ny Fitantanana -- [object Window] -- dia natokana ho an'ny assisting ny tompony, mpandraharaha sy ny managers ny fandraharahana orinasa any Etazonia tany am-azo antoka kokoa sy salama asa environments. Raharaha izao, OSHA dia namorona ny rafi-pampianarana fotoana izay tompona, mpandraharaha sy ny managers ny fandraharahana orinasa afaka nanararaotra ireo rehefa liana amin'ny toeram-fiarovana sy ergonomics. Ny pampianarana fotoana izay natolotry ny OS...
Fanaovana Vola An-Tserasera Amin'ny Alalan'ny Bilaogy, Vohikala, Ary Adwords
Raha toa ka olona efa an-tserasera ho an'ny rehetra habetsahan'ny fotoana, avy eo dia mety ho efa henonao angamba ny fomba tsara indrindra fanaovana vola an-tserasera amin'ny alalan'ny teninao manokana ny vokatra vaovao. Raha toa ka mandany fotoana rehetra manao fikarohana ny fomba fanaovana vola an-tserasera ianao dia tsy isalasalana fa tonga manerana an-jatony ny tranonkala mivarotra ianao ny fampanantenana riches raha toa ianao ka te-hividy ny vokatra na ny tolotra.
Nahoana no zava-Dehibe ny Mandefa ireo Mpampiasa Farany amin'ny Tetikasa Fitantanana ny Software
Ny fahombiazana vaovao fanaka fandraharahana ara-teknolojia dia mifototra amin'ny sakany isan'ny zavatra, fa ny famporisihana ireo mpampiasa fa tsy mihoatra noho ny niezaka ny overpower tena azy ireo dia manome ny tsara indrindra foundation. Ny realm ny tetikasa fitantanana ny software, Interneer Intellect ve izany fotsiny ihany.
Asa Fanovana? Mihevitra ny ISO 9000!
Ao amin'ny haste hametraka fanovana, vitsy ny orinasa fail mba mihevitra ny ISO 9000. Mihevitra izy ireo fa izany no ara-teknika tsotra ho reckoned miaraka ary izay ihany no antoka indostria tsy maintsy hanatanteraka. Fa ho an'ny knowledgeable, ny Soisa mifototra amin'ny Fenitra Iraisam-pirenena ny Fikambanana dia tsy maintsy occupy iray miavaka toerana ao amin'ny orinasa ny politika sy ny fomba, indrindra fa rehefa ireo paikady hahitàna ny asa fanovana.
Mametraka Ny Fandraharahana Amin'ny Aterineto
Ity lahatsoratra ity dia araho hatramin'ny vao haingana ny lahatsoratra aho nakarina andro vitsivitsy lasa izay momba ny fanatsarana ny fandraharahana ho an'ny Taona Vaovao. Amin'ity lahatsoratra ity aho dia handrakotra ny heriny sy ny sasany amin'ny antsipiriany fa tsy tokony hieritreritra toy ny fandraharahana madinika na any an-trano fototra tompona fandraharahana alohan'ny ianao hamorona vohikala. Koa aho, dia ataovy ny sasany ny vaovao fa ianao dia tokony mandinika ho an'ny tranonkala fampiantranoana ny orinasa ny n'ilay. Araka ny famoahana ny orinasa amin'ny aterineto izany manokatra ny orinasa miakatra ny lehibe ...
Mampiasa Outsourcing Rindrambaiko Mba Hampihenana Ny Fandaniana
Rehefa ianao mandinika ny Aterineto amin'ny ankapobeny, izany lasa mazava fa ny World Wide Web dia tsy mandray anjara amin'ny global fandraharahana paradigm. Fa ny maha-niteny, ny mpampiasa dia afaka mahazo mifandray amin'ny solosaina rindran-tany Zimbabwe na amin'ny Aterineto ny Teknolojia matihanina any Bombay ny tsotra dia tsindrio ny iray totozy. Io fahafaha-manatratra sy ny nanakarama olona dia novana ny fomba ny orinasa afaka nanao fandraharahana. Ho iray, tsy mila azy ireo hitazona feno ny mpiasa matihanina, amin'izany...
Mandrafitra Ny Lavorary Ary Azo Antoka Workstation: Manaraka Osha ny Tondrozotra Ao Crafting Ny Taonjato faha-21-Piasana
Raha toa ka ianao no tompony, ny mpikirakira na ny mpandrindra ny fandraharahana orinasa any amin'ny taonjato faha-21, ianao tsy isalasalàna mitady ny tenanao fandaniana tsara fifanarahana ny fotoana contemplating ny fomba tsara indrindra ianao dia afaka mandeha ny momba ny fandraisana ny fepetra ilaina amin'ny fanaovana antoka fa ny toeram-dia ny tsara indrindra suited sy safest ireto ny tontolo iainana ho ny mpiasa. Mikasika an'izay, ianao dia mety hahita ny tenanao misavoritaka momba izay azonao atao ny tadiavo ny tena azo antoka sy marina ny vaovao tamin'ny fijerena ny famoronana sy ny crafting iray ergo...
[object Window]: Fotoana manan-Karena sy ny Vola Ilaina
Ny zavatra tonga an-tsaina rehefa ianao mihevitra, 'seminera?'Suits, fifamatorana, avo hatramin'ny soson-karatra fanamarinana, Trano fandraisam-bahiny, tsara dining, [object Window]. ny lisitra mandeha amin'ny. Seminera hanampy tafakatra vola be sy fotoana- zavatra maro amin'ny Amerikana dia lasa tsy vonona ny ampahany amin'ny.
Inona No Data Fidirana Ny Asa?
Data fidirana ny asa hilazana ny hanintonana ny angona mikasika ny solosaina. Androany io no mety ho iray amin'ireo vitsy izay malaza indrindra miasa ao an-trano. Taitra proliferation ny data fidirana ny asa dia azo heverina fa avy amin'ny aterineto. Maro ireo fotoana ireo natao azo avy amin'ny World Wide Web ho an'ny Homemakers, ny mpianatra sy ny alike. Ny iray amin'ireo zava-dehibe ny antony dia ny fitomboan'ny ny amin'ny andalana data fampidirana mpiasa no mandidy mihena ny fotoana rehetra amin'ny toerana data fidirana mpandraharaha ao amin'ny birao. Ny...
Mora & Mampiavaka Ny Famantsiam-Fanomezana Ny Hevitra Torolalana Ho An'ny Fotoana Rehetra
Avelao ny Famantsiam-Fanomezana ny Hevitra Torolalana hanampy ianao amin'ny alalan'ny fanomezana vondron'orinasa fanomezana. Ny fanomezana dia ny zava-kanto
Mianatra Ny Fomba Mianjaika Ny Fampisehoana Mora Ny Lalana
Ny fanomezam-boninahitra ny olona noho ny zava-bitany mety hiteny ny iray lehibe fifanarahana momba ilay olona fa mety ihany koa ny mampiseho ny sincere fankasitrahana ny iray awarding sy recognizing ny recipients' ny fahombiazana.
Dia Ianao Sabotaging Ny Asako?
Ny ankamaroan'ireo mpitondra ireo sabotaging ny asany satria izy no manome ny fampahafantarana sy ny kabary fa tsy noho ny fahaiza miresaka. Eo amin'ny sehatry ny maha-iray ny valim-generator, ny mpitondra ny miresaka lavitra surpasses ny fampahafantarana na ny kabary. Ireto misy telo fanontaniana ianao dia tsy maintsy mangataka sy ny valiny alohan'ny ianao dia afaka manome ny fahaiza miresaka. Raha tianao ny valiny "tsy misy" mba misy ny iray amin'ireo fanontaniana, tsy azonao atao ny manome ny iray.
Ny Aterineto Manerantany&#8217;s Lehibe indrindra Telefaonina ho an'ny Fahombiazana Ny Fandraharahana
Ny Aterineto dia manome ny orginization na inona na inona mety ho ny goavana indrindra amin'ny fifandraisana misy periferika- tsotra , [object Window] , tanteraka - ara-teknika sy ny vidiny mahomby izay fotsiny underutilized sy tsotra ny tombontsoa mazava araka indrindra organizatiosn ao ny ara-barotra sy ny sampan'asa momba ny drafitry ny fivelarana .
Booming online fandraharahana androany!|[object Window]|
Tsy maintsy mpitsabo mpanampy na ny dokotera mba hanomboka ny manokana toeram-Pitsaboana Misahana ny. Ny zavatra hany ilainao dia ny amin'ny akaninjaza sy ny faniriana mba ho ny tena mpiasa. Io no hany indostria izay hisy foana ho tsy fahampian'ny. Tsy misy na oviana na oviana ny tahotra ho an'ny fifaninanana. Get amin'ny akaninjaza ankehitriny ianao dia afaka ny ho ao amin'ny fandraharahana ao anatin'ny herinandro latsaka([object Window]). Izao no fotoana ho an'ny rehetra sahisahy ny olona mba ho tap ity maro lavitrisa dolara ny indostria.
Online Fandraharahana – Asa Avy Any An-Trano – Mpandraharaha
Get nanomboka ny anao manokana amin'ny aterineto ny fandraharahana sy ny tap ao ny tanjaky ny aterineto mba hahatonga ny seriuos vola.
Ny Fivoaran'ny Angona Fikirakirana
Data Fikirakirana niova biriky lehibe teo amin'ny lafiny mihoatra ny fotoana. Raha afaka mamaky ny hira ny fanombohana ny maoderina analytical solosaina mba Charles Babbage (1791-1871)...
Ny Asa Ao An-Trano Ny Asa Ary Ny Fahafaha-Manao – Ny Fomba Fanaovana Ara-Dalàna Ny Vola Miditra Avy Any An-Trano
Olona an-tapitrisany eran-tany no enticed araka ny fahafahana miasa ao an-trano. Asa avy any an-trano mamela ny olona considerably kokoa flexibility, nisy fotoana miaraka amin'ny fianakaviana ary amin'ny ankapobeny alleviates ny rarin-tsaina goavana izay mety ho vokany avy mavitrika iny. Ao an-trano ny asa ihany koa ny desirable ho an'ny olona izay maniry ny mba hahatonga ny iray misy ny fidiram-ankoatra ny andro asa, mpianatry ny kolejy, natsahatra ny olona, ao an-trano ny reny sy ny zokiny olom-pirenena. An'arivony ny olona fikarohana amin'ny aterineto ny ampitson'ny...
Auto Varotra Fanofanana
Ny fotoana ho an'ny aterineto fiara mpividy tonga! Mamaky ny momba ny fomba-dry zareo hanavahana ny tenany avy ireo na ny namany sy ny fomba ianao dia afaka ny hahazo tombontsoa avy amin'ny fahafantarana ireo fahasamihafana.
Ny Fandikan-Teny Software, Mandika ny Vohikala sy Hampitombo ny Vohikala Fifamoivoizana
Ny fandikan-teny Breakthrough Software Fandaharana izay afaka Roa, Triple na Quadruple Ny Vohikala Fifamoivoizana sy Hahatratra 65% ny Tontolon'ny Aterineto mponina ianao amin'izao fotoana Izao dia Tsy hita popoka! Mandika tranonkala ho maro samihafa fiteny rehetra, mora sy effortlessly, ary hijery ny varotra sy mitady tombombarotra skyrocket!
Ahoana no mba Mitady ny Boky Fampiasana ny fivarotam-boky an-Tserasera
Mianatra ny hahalala ny tanteraka ny boky ho fanatsarana ny fahaiza-manao gaming. Eto, isika hifantoka amin'ny 5 mora toro-hevitra ho an'ny fampiasana an-tserasera bookstore.
Data Fidirana Ny Asa Mampiakatra
Data fampidirana mpiasa dia mitombo isa isan'andro. Novinavinaina fa farafahakeliny 40 tapitrisa ny olona miasa ao an-trano. Manam-pahaizana mino fa tian'i iditra fampidirana homework hisy sunny any amin'ny taona ho avy. Ny sondrom-isan'ny data fampidirana mpiasa no natao dia ny Aterineto. Ny World Wide Web dia namorona midadasika tombontsoa ho an'ny maro amin'ireo olon-tsotra, anisan'izany ny manam-pahaizana, hijanona ao an-trano sy ny asa amin'ny fotoana mitovy. Iray amin'ireo lehibe ny antony izay heverina fa avy ...
Fahasalamana Fanabeazana ao amin'ny Taonjato faha-21
Ny ara-pahasalamana ny indostria sy ny Aterineto foana vita mpiasany tsy dia mahazo aina bedfellows, na izany aza, ny fifandraisana dia nohatsaraina dramatically tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Tany amboalohany, raha ny Aterineto no tsy dia feno lalàna, ny fahasalamana manam-pahaizana no mitomany foul amin'ny proliferation of unlicensed fivarotam-panafody ary unlicensed ireo mpiasan'ny fandraharahana amin'ny World Wide Web. Raha ireo fitarainana subsided nifanojo ny vaovao mamaritra lalàna ho e-varotra, maro ny fahasalamana manam-pahaizana dia mbola miahiahy ny fiantraikan'ny Aterineto amin'ny indostria iray manontolo ny.
Dokam-barotra – Dia Ianao Wasting Ny Vola?
Sao dia izay manana vokatra mivarotra, hevitra hampiroboroboana na tolotra atolotra dia miantehitra amin'ny fifampiraharahana dokam-barotra mahazo ny sain'ny mitaky. Maro ny endrika dokam-barotra izany ahitana ny marina medium afaka indraindray ho daunting asa. Arakaraka ny karazana mpandraharaha, na ny antony ny mila ho fampiroboroboana ianao dia mety hahita fa mora kokoa ny mitady ny sasany torohevitra matihanina. Voalohany, ianao no mila manapa-kevitra izay ny lasibatra tsena dia, na ny lehilahy na ny vehivavy, efa taranaka,...
Ny Fiandohan'ny Dia…Ny Fandraharahana Drafitra
Fandraharahana fikasana dia lehibe amin'ny fandraharahana ny fahombiazana. Ny fandraharahana famintinana dia tokony hanome fohy ny soritsoritra iray manontolo ny fandraharahana sy ny manome ny: tanjona/tanjona sy amin'ny antsipirihany ara-barotra tetika ataovy ny lasibatra tsena, ny fifaninanana, mpanao dokambarotra an-tserasera, ny vidin-javatra, ny fivezivezena an-dranomasina/fiterahana sy ny fomba fandoavam-bola.
Manome MAIMAIM-poana Lava Halavirana Miantso ny rehetra Ny Mpanjifa sy ny Mpikambana ao aminy ary Jereo Ny Fandraharahana ny Mitombo!
AdCalls manome anao ny fahafahana nanangana ny anao mametraka PC-PC sy ny PC-2-Telefaonina amin'ny alalan'ny sampan-draharaha tsy Miankina amin'ny Mari-tsoratra ny Rindranasa. Azonao atao ny manome ny manokana mametraka AdCalls rafitra rehetra ireo ho AFAKA, raha ny fisamborana ny ain antsoy ny antsipiriany momba azy ireo toy ny anarana, mailaka, [object Window], faritra code sns.
Maka Vola Amin'ny Fanaovana Tsotra Data Fidirana World Wide
Olona mipetraka any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao no mijery ny fanovana ny fomba fiaina utilizing ny miditra nomena antsika amin'ny alalan'ny Aterineto. Maro no mitady Asa Ao an-Trano ny rindranasa, saingy mahita fa sarotra hita any amin'ny faritra sasany ao amin'ny izao tontolo izao. Ny iray an-tserasera ny asa ao an-trano ny rindranasa fa dia tena malaza sy malalaka kokoa dia Data Fidirana.
Misy Toeram-Pitsaboana Resume Tokony Handinika Ny Qualifications Toy Izany Koa Ny Reny Fahaiza-Manao.
9 Ny Vokatra Naming Toro-Hevitra
Ambony ny Saina Fanairana ao Equine Marketing: Familiarity Breeds Varotra
Mampitombo Ny Sandan'ny, Fampakarana Ny Karama
Hamadika Ny Mpanjifa Fitarainana ho Tsara
Ny Asa-at-Dia Tetikady. Hafa Euphemism araka ny Teny Fades ho Irrelevance
Biby fiompy: Ny fomba hikarakara ny Alika
Fitantanam-Voasokajy toe-draharaha miaraka amin'ny Mpanjifa iray Miompana amin'ny toe-tsaina